KU SAABSAN US - Xuzhou Sogood International Trading Co. Ltd.
Ku soo dhowow Sogood
Shirkad ahaan si buuxda loo leeyahay, Waxaan siineynaa haamo fara badan oo kala duwan, sida daryeelka shaqsiyeed, waxyaabaha la isku qurxiyo, cadarka, saqafka iyo isbaarada, cuntada iyo cabitaanka, baakadaha dawooyinka iyo kiimikada guryaha, waxaan siineynaa shirkado caalami ah iyo kuwa maxalliga ah labadaba. noocyo kala duwan oo adeegsiga dhamaadka ah.
10-kii sano ee la soo dhaafay waxay noqotay mid soo saarta xirfadleyda iyo hogaamiyaha warshadaha.
Warshaddeenu waxay leedahay 36 xarumood oo wax soo saar otomaatig ah, 70 qadka waxsoosaarka gacanta ah, waxsoosaar ka badan 2.8 milyan dhammaan noocyada wax soo saarka galaaska maalin kasta. Waxaan leenahay in kabadan 500 oo shaqaale, oo ay kujiraan 28 shaqaale xirfad sare ah, shaqaale kormeer tayo leh oo gaaraya 15 qof. Tayada wax soo saarkeena si adag ayaa loo ilaalinayaa oo lakab loo xakameynayaa.
Sida a waalid shirkad , warshadeena waxaa lagu aasaasay 2009 , oo u heellan gudaha gudaha iyo dibadaba oo ku koray warshaddii ugu weyneyd wax soo saarka ee gobolka Jiangsu.
Markuu tixgalinaayo soo iibsashada suuqyada dibedda ee wax iibsigu wuxuu u baahan yahay, waxaan aasaasnay ​​waaxda dhoofinta iyo dhoofinta gudaha 2019 , Xuzhou Sogood International Trading Co. Ltd , oo ku hawlan horumarinta wax soo saarka, hal abuurnimo waara iyo isuduwidda arrimaha dhoofinta.
Iyada oo in ka badan 10 sano ah oo waayo-aragnimo horumarsan u leh suuqgeynta iyo xakamaynta tayada, haysashada in ka badan 2,000 oo mitir oo laba jibaaran labajibaaran magaalada Xuzhou, oo haysata malaayiin alaabooyin la heli karo, ayaa si buuxda u buuxisay baahida ganacsatada.